Niresaka fihavanana sy firaisam-pirenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany Vohipeno omaly kanefa nodiany fanina tanteraka ilay fampihavanam-pirenena natomboky ny FFKM. Nanjavona tsy hita popoka ilay fehin-kevitra 19 pejy nivoaka tamin’ny fikaonan-doha teny Ivato herintaona mahery kely lasa izay. Ny praiminisitra Solonandrasana indray moa omaly dia nipasoka ny efa malama ka nilaza fa vita amin’ny 90% ny asa fanorenana ireo fotodrafitrasa handraisana ny fivorian’ny Frankôfônia, hotanterahana eto afaka 12 andro. Nambarany fa hisy koa ny « Opération sécurisation des zones rouge » na hetsika hametrahana ny filaminana any amin’ireo faritra mena. Voakasik’izany i Maevatanana, Bongolava, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Anosy ary Androy. F’angaha moa tsy efa hatry ny ela no fantatra fa faritra mena amin’ny asan-dahalo ireo faritra ireo ? Nahoana no tsy efa nandraisana fepetra mifanaraka amin’izany fa izao dia hoe mbola afaka herinandro vitsivitsy no hanombohan’ny hetsika ? Efa am-polony ve ny olona maty vao milaza ny fitondram-panjakana fa handray fepetra momba ny firongatry ny fitsaram-bahoaka ? Fa angaha nisy fetr’isan’ny maty nandrasana mihitsy vao tonga saina fa ratsy ny raharaha ? Tsy hitan’ny fitondram-panjakana ve ny olona amina faritra maro eto amin’ny nosy efa tsy matahotra mpitandro ny filaminana intsony fa tena sahy manafika toby sy fonja tsotra izao io ? Inona ary ny vahaolana amin’izany ? Dia hoe ho avy koa ny fanasaziana ireo mangalatra jiro sy rano ary hotapahana ny jiro sy ranon’ny biraom-panjakana tsy mahaloa faktiora ara-dalàna. Ingahy filoham-pirenena ihany anefa no efa namoaka vavabe hoe ny fanjakana manampy ara-bola ny Jirama ka nahoana no hotapahana raha tsy mahaloa faktiora. Midika izany fa tsy misy paikady vaovao mihitsy entin’ny fitondrana HVM hanarenana ny firenena sy handaminana ny fiainana eto fa resadresaka no betsaka. Fanaon’ny olona malemy sy kanosa ary tsy mahavita asa, araka ny fandinihan’ny manampahaizana ny be resaka sy be lazao satria ny vavany no tena mailaka dia iny no ampiasainy hampandriana adrisa na hanambakana ny hafa.